Thu, Jul 2, 2020 at 10:23pm
अमेरिकामा चालीस लाख श्रमिकको पारिश्रमिक कटौती #आहा खबर# साम्राज्ञीविरुद्ध भुवन केसीले दिए कलाकार संघमा उजुरी #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे ‘इनफ इज इनफ’का अभियान्तालाई #आहा खबर# 'महत्वपूर्ण विधेयकबारे टुंगोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद' #आहा खबर# नेकपा विवादः एकता रक्षाका लागि प्रयास #आहा खबर# पार्टी एकताको भावना विपरीत नजान नेतृत्वलाई नेकपा पाल्पाको आग्रह #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा थप ३२ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि #आहा खबर# बिहीबार थप ४७३ जनामा देखियो कोरोना सङ्क्रमण #आहा खबर# नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री नै नआएपछि नेताहरू छलफलमा #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट डेढ महिने शिशुको मृत्यु #आहा खबर# ७ सयलृ घट्याे सुनकाे भाउ, कति पुग्याे ताेलाकाे ? #आहा खबर# सामसङले नेपाली बजारमा घटायाे स्मार्टफोनको मूल्य #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद‍् बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओली पुगे राष्ट्रपति निवास #आहा खबर# सरकारलाई जिम्मेवार बन्‍न राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको आह्‍वान #आहा खबर# बारामा चट्याङ लागेर धान रोपीरहेका चार महिलाको मृत्यु #आहा खबर#
अब साउदी अरेबियाका महिलाले एक्लै बिदेश यात्रा गर्न पाउने
रियाद, १७ साउन । अब साउदी अरेबियाका महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विदेश यात्रा गर्न सक्ने भएका छन् । शुक्रवार जारी शाही आदेश अनुसार २१ वर्ष पुगेका युवतीहरूले पुरुष अभिभावकको सहमती नभएपनि राहदानी प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यस अघि साउदी अरेबियामा महिलाहरूले राहदानी प्राप्त गर्न र विदेश यात्रामा निस्कन पति, पिता वा पुरुष नातेदारबाट अनुमति लिनुपर्ने थियो। राहदानीका लागि आवेदन दिन र एक्लै विदेश..
यमनी विद्रोहीको आक्रमणमा परी ४९ को मृत्यु
एडेन, १६ साउन यमनी सिया विद्रोही र जिहादी समूहहरूले गरेको छुट्टा छुट्टै आक्रमणमा परी यमनका कम्तीमा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । यमनी सरकारको नियन्त्रणमा रहेको देशको दोस्रो ठूलो सहर एडेनमा बिहीबार भएको आक्रमणमा परी उनीहरु मारिएका हुन् । लडाकूहरुले आत्मघाती बम आक्रमण र ड्रोनबाट आक्रमण गरेको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनीहरुका अनुसार मृत्यु हुने अधिकांश भर्खरै प्रशिक्षित कनिष्ट प्रहरी थिए । स्वास्थ्य..
इरानी विदेशमन्त्रीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, इरानले भन्यो - अमेरिका डरायो
वासिङ्टन, १६ साउन संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जावाद जरिफमाथि बुधबार प्रतिबन्धहरु लगाउने घोषणा गरेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धहरुमा विदेशमन्त्री जरिफको संयुक्तराज्य अमेरिकामा रहेको वा अमेरिकी संस्थाहरुको नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरिनुका साथै जरिफको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई सीमित गरिने छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभेन मन्चिनद्वारा जारी वक्तव्यमा जरिफले इरानी सर्वोच्च नेताका एजेन्डाको जथाभावी पक्षपोषण गरेको तथा इरानी सत्ताको मुख्य प्रवक्ताका रुपमा विश्वभर इरानी धारणा..
ओसामा बिन लादेनका छोरा हम्जाको मृत्यु !
काठमाडाैं, १६ साउन । अल-कायदाका संस्थापक ओसामा बिन लादेनका छोरा हम्जाको मृत्यु भएको छ। ३० वर्षिय हम्जा बिन लादेनकाे मृत्यु भएकाे अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गरिएका समाचारमा उनको मृत्युको मिति र स्थानबारे विस्तृत विवरण अस्पष्ट छ। फेब्रुअरी महिनामा अमेरिकी सरकारले उनी बसेको ठाउँबारे जानकारी दिनेलाई १० लाख डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। साउदी अरेबियाले गत मार्चमा उनको नागरिकता..
बाढीबाट उत्तरपूर्वी चीनका साढे ७ लाख प्रभावित
हार्बिन, १५ साउन चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण साढे सात लाखभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन् । स्थानीय सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कूल सात लाख ५७ हजार नौ सय जना बाढीबाट प्रभावित भएका हुन् । देशको हेइलोङजिआङ प्रान्तमा रहेका झण्डै ११ हजार चार सय घर परिवार विस्थापित भएको उनीहरूले बताएका छन् । बाढीले पाँच लाख ६३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको कृषि उपज नष्ट..
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनीपछि चीनले भन्यो - “अमेरिकी अहङ्कार”
शाङ्घाई, १५ साउन । एक वर्षदेखि जारी अमेरिका–चीन “व्यापार युद्ध”को अन्त्यको उपाय निकाल्न चिनियाँ र अमेरिकी व्यापार मध्यस्थकर्ताहरुको वार्ता शाङ्घाईमा बुधबार पुनः शुरु भएको छ । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नुभएका पछिल्ला ट्वीटले वार्तालाई नै ओझेलमा पारेको छ । व्यापारमा समस्या देखिएको भन्दै अमेरिका र चीनले एकअर्काका करिब तीन खर्ब ६० अर्ब डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । अमेरिकाले चिनियाँ..
बेइजिङ, चीन, १४ साउन चीनको उत्तर पश्चिमी सिनच्याङ युगुर स्वायत्त प्रदेशमा पाँच बर्षमा २३ लाख १० हजार नागरिक गरिबीबाट मुक्त गरिएको क्षेत्रीय अधिकारीले मङ्गलबार जनाएका छन् । सन् २०१३ मा उक्त क्षेत्रको गरिबीदर १९.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा उक्त क्षेत्रको गरिबी दर छ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् १९७८ मा उक्त प्रदेशको ग्रामिण इलाकाका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय ११९ युआन रहेकोमा सन् २०१८..
राहुल गान्धीले पद त्यागेपछि प्रियंका गान्धी कांग्रेस अध्यक्ष !
नयाँ दिल्ली, १४ साउन । प्रियंका गान्धी भारतीय प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईको अध्यक्ष हुने संकेत देखिएकाे हाे । पछिल्लाे समय अध्यक्ष उम्मेदवारका लागि प्रियंका गान्धीको नाम बाहिर आएको हाे । कांग्रेसमा गान्धी परिवारको विरासत रहँदै आएकामा अब पालो प्रियंकाको आएको भन्दै उनकै नाममा सर्वसम्मत हुने संकेत देखिएको छ । राहुल गान्धीले पद त्यागेपछि प्रियंकालाई भावी अध्यक्षका रुपमा हेरिएको छ । कांग्रेसभित्र दिग्गज एवं..
एकै दिन ३ करोड ५० लाख बिरुवा रोपेर विश्व कीर्तिमान
काठमाडौँ, १४ साउन । अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाले एकैदिनमा ३ करोड ५० लाख भन्दा बढी विरुवा रोपेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अफ्रिकी यूनियनका स्वयम्सेवीले १२ घण्टाको अवधिमा ती विरुवा रोपेको यहाँको खोज तथा प्रविधि मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । हरियाली वातावरणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री अबी अहमदले अघि सारेको योजना अनुरुप मुलुकभरका १ हजार भन्दा बढी..
अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरू त्रसित
काबुल, १३ साउन अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छन् । राष्ट्रपति असरफ घानीका सहयोगी तथा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारको कार्यालयमा जनधनको क्षति हुनेगरी विस्फोटन भएपछि उम्मेदवारहरुले असुरक्षित महसुस गरेका हुन् । उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार अमरूल्लाह सालेहको कार्यालयमा भएको आतंककारी हमलामा परी २० जनाको मृत्यु भएको र थुप्रै घाइते भएको घटनापछि उनीहरूले सुरक्षाको खतरा महशुस गरेका हुन् । आइतबार भएको आक्रमणमा मृत्यु भएकामध्ये..
ट्रम्प प्रशासन छाड्दै अमेरिकी राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका प्रमुख
काठमाडौँ, १३ साउन । अमेरिकाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकायका प्रमुख डान कोट्सले पद छोड्ने भएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनबाट बाहिरिने उनी पछिल्लो उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरेर कोट्स आउँदो अगस्टको मध्यदेखि पदमा नरहने उल्लेख गरेका छ । उनको ठाउँमा टेक्सासबाट कंग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने जोन र्‍याट्क्लिफलाई नियुक्त गर्ने पनि ट्रम्पले जनाएका छन् । र्‍याट्क्लिफको नेतृत्वमा देश महानता तर्फ..
टोकियो, १२ साउन जापानमा आइतबार ६.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प आएको छ । देशको दक्षिणपूर्वी तटीय क्षेत्रमा स्थानीय समय अनुसार बिहान ३.३१ बजे भूकम्प गएको जापानको मौसम विज्ञानसम्वन्धी कार्यालयले जनाएको छ । जमिनको सतहबाट करिब ४२० किलोमिटर गहिराईमा भूकम्प गएका कारण सुनामीको खतरा नरहेको सम्भावना स्पष्ट गरेको छ । ..
मेक्सिको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल बनाउन ट्रम्पले पाए स्वीकृति
काठमाडौँ, ११ साउन अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मेक्सिकोसँग रहेको दक्षिणी सीमाको एउटा खण्डमा पर्खाल बनाउन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सैन्य कोषबाट २.५ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने आदेश दिएको छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्प गरेको एक ट्वीटमा सीमा सुरक्षा र विधिको कानूनको ठूलो विजय भएको बताएका छन् । क्यालिफोर्नियाका एक न्यायाधीशले उक्त कोष प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरी दिएको आदेशविरुद्ध..
६ वर्षीया युट्युब स्टार जसले किनिन् ८० लाख अमेरिकी डलरको घर
काठमाडाैं, ११ साउन । ६ वर्षीया युट्युब स्टारले लाखौँ डलर पर्ने एक पाँच तले घर किनेकी छन् । दक्षिण कोरियाकी ६ वर्षीया युट्युब स्टारले ५ तले घर किनेकी हुन् । ३ करोड सब्सक्राइबर भएकी बोरामले अभिभावकद्वारा खडा गरिएको बोराम फेमली कम्पनीमार्फत् सो घर खरिद गरेकी हुन् । सियोलको आधुनिक उपनगर गङ्नामस्थित उक्त घरको मूल्य ९ अर्ब ५० करोड कोरियन वन (८० लाख अमेरिकी..
फिलिपिन्समा आएको शक्तिशाली भूकम्पमा ८ जनाकाे मृत्यु
फिलिपिन्स,११ साउन । फिलिपिन्समा लगातार दुईवटा शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । भूकम्पका कारण कम्तिमा ८ जनाको ज्यान गएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भूकम्पका कारण झण्डै ६० जना घाइते भएका छन् । शनिबार बिहानै फिलिपिन्सको बातानेस प्रान्त केन्द्रविन्दु भएर ५.४ र ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो । भूकम्प गएका बेला अधिकांश मानिस घरमै थिए । भूकम्प गए पनि सुनामीको चेतावनी..
बगदाद हमलामा १२ जना मारिए, दर्जनौँ घाइते
एजेन्सी, १० साउन इराकको राजधानी बगदादमा लगातार भएका तीनवटा बम विस्फोटमा कम्तिमा १२ जना मारिएका छन् । अरु दर्जनौँ घाइते छन् । पहिलो हमला स्थानीय समयअनुसार बिहीबार बिहान ८ बजे पूर्वी काबुलस्थित सरकारी कर्मचारीहरुलाई बोकेर गुडिरहेको गाडीप्रति लक्षित थियो । जहाँ पाँचजना मारिए र १० जना घाइते भए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नसरत रहिमीका अनुसार मिनी बसमा भएको हमलापछि दोस्रोपटक आत्मघाती आक्रमण भएको..
‘उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्रबाट खतरा छैन’
सियोल, १० साउन । उत्तर कोरियाले बिहीबार गरेको नयाँ किसिमको क्षेप्यास्त्र परीक्षणबाट दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कुनै खतरा नरहेको बताइएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य कमाण्डले शुक्रबार सो जानकारी गराएको समाचारमा जनाइएको छ । सो संयुक्त सैन्य अभ्यासको कमाण्डका सैनिक अधिकारीहरुले शुक्रबार सो कुरा बताएका हुन् । उत्तर कोरियाले बिहीबार बिहानै उत्तर कोरियाको वोनसानबाट दुई वटा नयाँ प्रकारका..
को हुन नयाँ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन ?
काठमाडौँ, ९ साउन बेलायतको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सन जुलाई २४ तारिख एलिजावेथ द्वितीयाको अनुमतिमा औपचारिक रूपमा बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन । प्रधानमन्त्री निवासअगाडि सम्वोधन गर्दै उनले बेलायती सर्वसाधारणप्रति संसदको वचन पूरा गर्न अक्टोबर ३१ अघि नै बेलायतलाई युरोप लिगबाट बाहिर ल्याउने विचार व्यक्त गरे । उनले युरोप लिगसँग नयाँ सम्झौता सम्पन्न गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनका अनुसार,..
काबुलकाे श्रृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटमा १५ जनाकाे मृत्यु
काबुल, ९ साउन । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएका श्रृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटमा १५ जनाकाे ज्यान गएकाे छ ।अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी सेनाध्यक्षले भ्रमणमा रहेका बेला काबुलमा विभिन्न तीन विष्फोट भएका हुन् । आक्रमणकारीले त्यहाँको खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्रालयका कर्मचारी चढेको बसलाई लक्षित गरी बम विष्फोट गराएको र उक्त आक्रमणमा ८ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । उक्त आक्रमणमा अरु २७ जना घाइते भएका छन् । आक्रमणमा मारिने तथा..
बोरिस बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ९ साउन । बेलायतमा बोरिस जोन्सन नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले बुधबार उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । जोन्सनले बुधबारै पदभार ग्रहण गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ । उहाँ सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता हुनुहुन्छ । जोन्सन मङ्गलबार सो पार्टीको नयाँ नेता चुनिनुभएको हो । बकिङ्घम दरबारमा महारानी एलिजाबेथलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा निवास टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा फर्किएपछि उहाँले देशवासीका नाममा..
प्रधानमन्त्री मेद्वारा महारानीसमक्ष राजीनामा पेश
लण्डन, ८ साउन बेलायती प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन लाग्नु भएकी थेरेसा मेले बुधबार औपचारिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले आफ्नो राजीनामा पत्र बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई बुझाउनु भएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । उहाँको राजीनामा स्वीकृतिसँगै महारानीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोरिस जोनसनलाई नियुक्त गर्नुहुने भएको छ । जोनसन कन्जरभेटिभ पार्टीका नेतामा निर्वाचित भएकाले उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको हो । बेलायतमा सामान्यतया..
उच्च प्रविधियुक्त सेना बनाउन चीनको नयाँ योजना सार्वजनिक, अमेरिकाको चेतावनी
बेइजिङ, ८ साउन । चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सेनालाई आधुनिक, उच्च प्रविधियुक्त बनाउने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा योजना बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । बेइजिङमा सार्वजनिक उक्त योजना दस्तावेजमा अमेरिकाले विश्व रणनीतिक स्थायित्वलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै ताइवानको स्वतन्त्रता विरुद्ध चेतावनी दिइएको छ । सन् २०१२ यता पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको यस स्वेतपत्रमा विश्वकै सर्वाधिक ठूलो सेना र बेइजिङको सैन्य महत्वाकाँक्षाका बारेमा भने केही उल्लेख छैन..
बाेक्सिङका क्रममा घाइते भएका रुसी बक्सरकाे मृत्यु
काठमाडौं, ८ साउन । खेलका क्रममा घाइते भएका रुसी बक्सर उपचारारका क्रममा निधन भएकाे छ । बक्सिङ खेलका क्रममा घाइते भएका रुसी बक्सर म्याक्सिम दादासेभको निधन भएको हाे । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा आइबीएफ लाईट वेल्टरवेटको फाइटका क्रममा उनी घाइते भएका थिए । २८ वर्षीय दादासेभ क्यारेबिएन राष्ट्र पुएर्टो रिकोका बक्सर सुब्रिएल माटियाससँग फाइट गरिरहेका थए ।अन्तिम राउण्डको फाइट चलिरहँदा घाइते भएपछि दादासेभलाई अस्पतानल भर्ना गरिएको थियो..
बेइजिङ, ७ साउन चीनको राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेस (एनपीसी) स्थायी समितिका पूर्व प्रमुख तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ली फङ को निधन भएको छ । उहाँ ९१ बर्षको हुनुहुन्थ्यो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समिति, चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समिति, चीनको राज्य परिषद, चीनको जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलनले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राज्य परिषदका पूर्व प्रधानमन्त्री ली को मृत्यु भएको जानकारी गराइएको हो । उहाँको..
अमेरिकाकी कान्छी सांसदलाई गोली हान्नुपर्छ प्रहरी बर्खास्त
वासिङटन, ७ साउन । सांसदलाई गोली हान्नुपर्ने भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्ने एक जना प्रहरी अधिकारी र लाइक गर्ने उनका सहयोगी बर्खासीमा परेका छन्। अमेरिकाकी कान्छी सांसद अलेक्जान्ड्रिया ओकासियो कोर्टेजलाई गोली हान्न पर्ने भन्दै फेस्बुकमा स्ट्याटस ग्रेटना प्रहरी विभागका प्रहरी अधिकारी चाल्र्स रिस्पोली बर्खास्तमा परेका हुन्। उनले गएको विहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका थिए। उनको स्ट्याटस लाइक गर्ने एन्जेलो भरिस्कोलाई पनि कारवाही गरिएको इन्टरनेसनल..
वासिङ्टन, ७ साउन अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आतंकवादी संगठन अल–कायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमा रहेबसेको ठाउँका बारेमा पाकिस्तानी गुप्तचर निकायहरुले नै अमेरिकालाई सूचना दिएको बताउनुभएको छ । पाकिस्तानले हालसम्म बिन लादेन पाकिस्तानको कुन ठाउँमा बस्थे भन्ने आफूहरुलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँदै आएको थियो । अमेरिकी विशेष फौजले पाकिस्तानभित्रै प्रवेश गरेर सन् २०११ मे २ तारिखमा गरेको कारबाहीमा बिन..
तीन महिनादेखि हराएको कुकुर भेट्नेलाई घर र जग्गा पुरस्कार
काठमाडाैं, ७ साउन । एक व्यक्तिले उनकाे हराएकाे कुकुर खाेजिदिनेलाई घर र जग्गा उपहार दिने बताएका छन् । चिहुवाहुवा प्रजातिको कुकुरलाई खोज्न महिनौं बिताएका उक्त व्यक्तिले एउटा बेडरुम भएको घर र जग्गा कुकुर फिर्ता ल्याइदिने व्यक्तिलाई दिने घोषणा गरेका हुन् । एडी कोलिन्सको जेनी नामको प्रिय कुकुर गत अप्रिलमा हराएकाे थियाे । अमेरिकाको टक्सन निवासी उनले त्यतिबेलादेखि प्रत्येक दिन कुकुरलाई खोजिरहेका छन् ।..
कश्मिर मुद्दामा ट्रम्पको झुटो बोली !!
काठमाडौं, ७ साउन । कश्मीरको विषयलाई लिएर पाकिस्तानसँगको तनाव अन्त्यका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह नगरेको भारतले दाबी गरेको छ । कश्मिर मुद्दामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई मध्यस्थता गरिरिदन आग्रह गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी झुटो रहेको भारतले स्पष्ट पारेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भने, ‘‘दुई साताअघि नरेन्द्र..
सिरियाली सरकारको हवाइ हमलामा पत्रकार सहित १८ जना मारिए
काठमाडौँ, ६ साउन सिरियाली सरकारको हवाइ हमलामा एक पत्रकार सहित १८ जना मारिएका छन् । आइतबार उत्तरपश्चिम क्षेत्रस्थित इडलिब प्रान्तमा भएको हमलामा अनस अल दयाद नामका पत्रकार समेत मारिएका हुन् । ‘सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स’का अनुसार केही मानिस अझै भग्नावशेषभित्र थुनिएकाले मृतकको संख्या बढ्नसक्ने छ । सिरियाली युद्धका कारण २०११ देखि अहिलेसम्म ३ लाख ७० हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । साथै..
अमेरिकामा करोडौं व्यक्ति ‘लु’ को चपेटामा, यसरी छल्दै छन् गर्मी
वासिङटन, ६ साउन । अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अहिले गर्मी उच्च भएको छ । धेरै क्षेत्रमा तातो हावा चल्दा जनजीवन प्रभावित छ । अमेरिकाको न्यूयोर्क, फिलाडेल्फिया र वासिङटन लगायतका कैयौं शहरमा तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । मध्य पश्चिमी मैदानदेखि एटलान्टिक किनारसम्म करिब १५ करोड व्यक्ति तातो हावा (लु)सँग जुधिरहेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण कतिपय कार्यक्रम स्थगित भएका छन् । अमेरिकी नेशनल..
Results 1602: You are at page 18 of 54